दक्षिण कोरियाको विमानस्थलमा ३७ नेपाली अलपत्र,के भन्छ सौलस्थित नेपाली दूतावास ? - Tamang Online
दक्षिण कोरियाको विमानस्थलमा ३७ नेपाली अलपत्र,के भन्छ सौलस्थित नेपाली दूतावास ?
याम्बु । दक्षिण कोरियाको विमानस्थलमा ३७ नेपाली अलपत्र परेका छन् । दक्षिण कोरियाको इन्छान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक युवती र ३६ जना युवा अलपत्र परेका हुन् ।
शुक्रबार बिहान स्थानीय समय अनुसार ५ बजे दक्षिण कोरियाबाट काठमाडौंका लागि कोेरियन एयरलाइन्सले उडान भर्ने तालिका थियो । सो उडानमा २ सयभन्दा बढी नेपालीले स्वदेश फर्किनको लागि टिकट काटेका थिए । तर, अन्तिम समयमा एयरलाइन्सका प्रतिनिधिहरुले कोरोना परीक्षण गरेको रिपोर्टमा स्पष्टसँग नलेखिएको भन्दै बाजुराका प्रभाव शाही, पाँचथर फिदिमका सरोज गुरुङसहित ३७ जना नेपालीलाई रोकेपछि उनीहरु अलपत्र परेका हुन् ।
बाजुराका शाहीका अनुसार उनीहरु सबैजनाको साथमा कोरोनाको संक्रमण नभएको नेगेटिभ रिपोर्ट थियो । तर, आफूहरुलाई बोर्डिङ पास लिइसकेपछि एरयलाइन्सका कर्मचारीहरुले रिपोर्टमा पीसीआर नलेखिएको भन्दै जान नमिल्ने भनेर रोकेको उनले बताए । ‘हामीहरु सबैजनासँग कोरोनाको नेगेटिभ रिपोर्ट थियो । जुन रिपोर्ट यहाँको सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि अनुमति दिएका हस्पिटलहरुमा गरिएको थियो,’ शाहीले डिसी नेपालसँगको भर्चुअल कुराकानीमा आफ्नो रिपोर्ट देखाउँदै भने, ‘तर, हामी ३७ जनालाई रिपोर्टमा पीसीआर नलेखिएको भन्दै अन्तिम समयमा रोकियो । हाम्रो परीक्षण पीसीआर माध्यमबाटै गरिएको थियो ।’ अन्तिम समयमा विभिन्न बहाना गरेर आफूहरुलाई रोकेको उनको भनाइ छ ।
शाहीका अनुसार उनीहरु सबैले सरकारले दक्षिण कोरियाको लागि तोकेको हवाइ भाडादर भन्दा मंहगो तिरेर टिकट खरिद गरेका थिए । उनीहरुले केएमआइ ट्राभल्सलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख ३० हजार नेपाली रुपैयाँ बुझाएर टिकट काटेका थिए । केएमआइ दक्षिण कोरियामा नेपालीले नै सञ्चालन गरेको ट्राभल एजेन्सी हो ।
एयरलाइन्सका कर्मचारीले अन्तिम समयमा रिपोर्टमा त्रुटि भएको भन्दै उड्न नमिल्ने बताएका थिए । उड्नै नमिल्ने भनेपछि उनीहरुले भनेअनुसारको रिपोर्ट जुटाउन कोरियन एयरलाइन्सका कर्मचारीहरुसँग केही समय मागेका थिए । ‘पीसीआर नलेखेकै कारण उड्न मिल्दैन भनेपछि हामीले केही समयको व्यवस्था गर्दिनुहोस् तपाईहरुले भनेअनुसारकै रिपोर्ट सम्बन्धित हस्पिटलहरुमा भनेर जुटाउँछौ भनेका थियौँ,’ फिदिमका राईले भने, ‘चेक गराएका हस्पिटलहरुले हामीलाई एयरलाइन्सले भने अनुसारकै रिपोर्ट तयार गरेर इमेलमा पठाइदिन्छौँ भनेका थिए । तर, इमेलबाट आएको नहुने भन्दै सक्कली नै चाहिने भनियो । समय पर्याप्त थिएन । विमानस्थलबाट बाहिर गएर तुरुन्तै रिपोर्ट ल्याउन सक्ने अवस्था पनि रहेन । आखिर हामीलाई छोडेर जहाज उड्यो । हामी विचल्लीमा पर्‍याैँ ।’
उनीहरुमध्ये धेरैजनाको करार अवधि सकिएको लामो समय भइसकेको छ । करार अवधि सकिएपछि उनीहरु यसअघि नै स्वदेश फर्किन चाहेका थिए । तर, लकडाउनका कारण उतै बस्न वाध्य थिए । कतिपय त कोरोना महामारीकै कारण रोजगारी गुमाएर फर्किन लागेका थिए । राईका अनुसार उनीहरु सबैले नेपाली करिब १५ हजार रुपैयाँ तिरेर पीसीआर टेस्ट गराएका थिए ।
‘हाम्रो रिपोर्टमा पनि नाक र मुखबाट स्वाव लिएर टेस्ट गरिएको भनेर लेखिएको छ । स्वाव लिइएपछि टेष्ट गरिने भनेको पीसीआर नै होइन र ? रिपोर्टमा कोरोना नेगेटिभ भनेर स्पष्टसँग लेखिएको छ । त्यही पीसीआर भन्ने नलेखेको भनेर रोकियो । अब हाम्रो जिम्मेवारी कस्ले लिने?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने । यसअघि सोही व्यहोरा लेखिएको रिपोर्ट लिएर थुप्रै नेपालीहरु स्वदेश फर्किएको उनीहरुको भनाइ छ ।
सोही उडानमा सौलस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत ३ जना कर्मचारी पनि स्वदेश फर्किदै थिए । तर, आफूहरुको समस्या आँखै अगाडि देखेपनि ती कर्मचारीहरुले वास्ता नगरेको उनीहरुको आरोप छ । एक युवाले भने– ‘दूतावासमा काम गर्ने ३ जना स्टाफ पनि नेपाल जाँदै हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु हाम्रै साथमा हुनुहुन्थ्यो । तर, हाम्रो समस्या बारेमा केही मतलब राख्नुभएन । हामीले समस्या सुनाउँदै बारम्बार केही पहल गर्नुहोस् भन्दै अनुरोध गर्दा पनि तर्किनु भयो ।’
उनीहरुले दूतावासका कर्मचारीमाथि मानवीय संवेदना समेत नभएको आरोप लगाएका छन् । दर्जनौँ नेपाली विमानस्थलमा अलपत्र परेको देख्दा पनि ती कर्मचारी मुकदर्शक बनेको उनीहरुको भनाइ छ ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म पनि उनीहरु विमानस्थलमै बसिरहेका छन् । कम्पनीबाट फाइनल आउट भइसकेकोले फर्केर जाने ठाउँ पनि नभएको उनीहरु बताउँछन् । नेपाल फर्किने भएपछि आफूहरुसँग भएको पैसाबाट विमानस्थलसम्म पुग्ने खर्च राखेर सबै पैसा नेपाल पठाइसकेका छन् । अहिले पाउरोटीको भरमा प्राण धानेको उनीहरुले बताए ।
‘२० घण्टा बढी भयो हामी यहाँ विमानस्थलमा आएको । अब हाम्रो फर्केर जाने ठाउँ पनि कतै छैन । पैसा पनि छैन । भोक लागिरहेको छ । अलिअलि भएको पैसाले पाउरोटी किनेर बाँडेर खाएका छौँ । एयरपोर्ट भित्र मंहगो उत्तिकै छ । अब त पानी किनेर खाने समेत पैसा हुँदैन,’ बाजुराका शाहीले दुःख सुनाए ।
आफूहरुको बस्ने ठाउँ नभएको हुँदा विमानस्थलमै बस्नुको विकल्प नभएको उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले आफूहरुको कुनै गल्ती नभएको हुँदा सम्बन्धित एयरलाइन्स र ट्राभल कम्पनी जिम्मेवार हुने बताए । उनीहरुले जतिसक्दो छिटो सम्बन्धित एयरलाइन्सले आफूहरुको उद्धार गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । समयमै उद्धार नगरे आफूहरु विमानस्थलमै भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउने शाहीले बताए । ३ दर्जनभन्दा बढी नेपाली विमानस्थलमा अलपत्र पर्दा पनि अहिलेसम्म सौलस्थित नेपाली दूतावास तथा एनआरएनए दक्षिण कोरियाले आफूहरुको बारेमा कुनै चासो नलिएको उनको भनाइ छ ।
इन्छान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अति व्यस्त रहने विमानस्थल हो । विमानस्थलमै अस्तव्यत तरिकाले बस्नुपर्दा कोरोनाको संक्रमण हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ । विदेशबाट आउने शतप्रतिशत यात्रुको साथमा कोरोना भाइरस परीक्षण गरेको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भए होटल क्वारेन्टिन बस्नु नपर्ने नेपाल सरकारको नियम छ । विदेशबाट पीसीआर परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ लिएर आएमा उनीहरु सिधै विमानस्थलबाट होम क्वारेन्टाइनमा जान सक्ने सरकारी मापदण्ड छ ।
तर, केही एयरलाइन्सहरुले कोरोनाको परीक्षण नै नगरेका यात्रुलाई समेत ल्याउन थालेपछि पीसीआर गरेर आएकाहरुलाई पनि सरकारले होटल क्वारेन्टाइनमा राख्न थालेको छ । विमानमा एक जना यात्रु मात्रैको पनि पीसीआर रिपोर्ट नभएमा सरकारले सबै जनालाई होटल क्वारेन्टाइन पठाउने गरेको छ । होटलमा हुने खर्च पनि सम्बन्धित एयरलाइन्स कम्पनीले तिरिदिन सरकारले निर्देशन दिन थालेको छ ।
त्यसैले गर्दा कोरियन एयरले उनीहरु ३७ जनालाई नल्याइ आएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । तर, उनीहरु सबै जनाले भने कोरोनाको पीसीआर परिक्षण नै गरेको दावी गरेका छन् । रिपोर्टमा पीसीआर शव्द नलेखिनु आफ्नो दोष नभएको बताउँदै उनहिरुले यसबारेमा टिकेट विक्रेता एजेन्सी केएमआइ ट्राभल्स कम्पनी र सम्बन्धित एयरलाइन्स पहिले नै सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् । यात्रुको डकुमुेण्ट समयमै रुजु नगर्नु, यात्रुलाई राम्रोसँग जानकारी दिन नसक्नु केएमआइ ट्राभल एजेन्सीकै कमजोरी हुने उनीहरुले बताएका छन् ।
के भन्छ सौलस्थित नेपाली दूतावास ?
पीडितहरुले दूतावासले आफूहरुको समस्याप्रति चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन् । तर, सौलस्थित नेपाली दूतावासले भने यसबारेमा दूतावास जानकार रहेको बताउँदै समस्या समाधानतर्फ पहल गरिरहेको जनाएको छ । दूतावासका उपनियोग प्रमुख रामसिंह थापाले उनीहरुको रिपोर्टमा भेटिएका केही त्रुटिको कारणले यस्तो समस्या आएको बताए ।
‘उहाँहरुमध्ये कसैको रिपोर्टमा परीक्षण गरिएको बारेमा स्पष्टसँग लेखिएको रहेनछ । कसैको मिति मिलेको छैन, कसैको म्याद सकिइसकेको रहेछ,’ उनले डिसी नेपालसँग टेलिफोनमा भने, सरकारको मापदण्ड अनुसार पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य भएकोले एयरलाइन्सले उहाँहरुलाई नलगी गएको हो ।’ उनले अब उनीहरुले अर्काे विमान पर्खिनुको विकल्प नभएको बताए ।
विमानस्थलमै भएका कर्मचारीले उनीहरुको समस्या बेवस्ता गरेको भन्ने कुरालाई भने उनले अस्वीकार गरे । ‘तीन जना कर्मचारी होइन नेपाल जान लागेको एक जना मात्रै हो । उहाँको साथमा परिवार पनि थियो,’ उनले भने, ‘दूतावासले चासो नदिएको भन्ने गलत हो । अहिले पनि हाम्रा कर्मचारीहरु विमानस्थलमै हुनुहुन्छ ।अहिले नै नेपाल पठाउने अवस्था नरहेकोले हामी उहाँहरुको त्यहाँबाट उद्धार गर्दैछौँ ।’ उनले बस्ने विकल्प नभएकाहरुलाई एनआरएनएलगायतका संघसंस्थाको समन्वयमा आश्रय दिएर राखिने बताए । उनले ती ३७ जना यात्रुको पीसीआर रिपोर्ट साँच्चिकै गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान हुने बताए @डिसीनेपाल
« युवराज खतिवडा बाहिरिएपछि दुई मन्त्रालय रिक्त हुने, मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने (Previous News)
(Next News) रथजात्रामा सुरक्षाकर्मीको अनावश्यक बल प्रयोग,आदिवादी जनजाति महासंघको प्रेस विज्ञप्ति »